Al-Shabaab oo weerar ku qaaday Mukhtaar Roobow - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaAl-Shabaab oo weerar ku qaaday Mukhtaar Roobow
August 9, 2017 Puntland Mirror Somalia 0
Al-Shabaab oo weerar ku qaaday Mukhtaar Roobow. [Sawirka: Archive]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Dagaalyahano hubaysan oo ka socda Al-Shabaab ayaa subaxnimadii hore saakay oo Arbaco ah weerar culus ku qaaday Mukhtaar Roobow Abu Mansuur, sida ay sheegeen dadka deegaanka iyo ilo-wareedyo dhanka ammaanka ah.
Dagaal culus oo u dhaxeeya labada dhinac ayaa hadda ka socda deegaan u dhow magaalada Xudur ee gobolka Bakool, sida ay wararku sheegayaan.
Bishii lasoo dhaafay, Al-Shabaab ayaa bilowday ugaarsiga si ay u dilaan ama u qabtaan Mukhtaar Roobow Abu Mansuur kadib markii dhawaan Mareykanku uu ka saaray liiska argagixisada.
Abu Mansuur oo horey u soo noqday hoggaamiye ku xigeenka iyo afhayeenka kooxda ayaa tan iyo sanadkii 2013-kii ku dhuumanayay deegaano kuyaala gobolada Bay iyo Bakool halkaas oo uu asal ahaan ka soo jeedo.
Bishii June ee sanadkan, Wasaaradda Arrimaha Dibada ee Mareykanka ayaa sheegtay in ay liiska argagixisada ka saartay Mukhtaar Roobow Abu Mansuur.
June 26, 2017 Al-Shabaab oo bilowday ugaarsiga Mukhtaar Roobow Abu Mansuur kadib markii Mareykanku ka saaray liiska argagixisada
September 6, 2017 Mareykanka oo sheegay in ay saddex dagaalyahan oo katirsan Al-Shabaab ku dileen gobolka Bay
Garowe-(Puntland Mirror) Puntland Security Forces (PSF) said they launched a major operation in the areas of Majiyahan and Madarshoon in Galgala hills in revenge for deadly attack at security checkpoint of Bosaso that were claimed [...]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya ayaa sheegay in uu ka shaqeyn doono sidii dalkiisa looga saari lahaa liiska dalalka muwaadiniintooda laga mamnuucay soo galitaanka Mareykanka. Maxamed Cabdullaahi Maxamed oo loo yaqaan “Farmaajo” ayaa idaacada [...]